Iilebhu zeSilicon zizama ukonyusa ukusetyenziswa kweKhaya laseKhaya | IPhone iindaba
UAlvaro Fuentes | | Izaziso, Iimveliso ze-Apple
Izixhobo ezixhume kwiKhayaKit ziye zanda ngakumbi kwaye ziyafikeleleka kwaye ziye zonyusa ubukho bazo kwimarike okoko le teknoloji yaqala ukwaziswa, kodwa kusekho indawo yokuphucula. Ukuzama ukulungisa ezinye zeengxaki ngeqonga lika-Apple lamakhaya axhunyiwe, iiLebhu zeSilicon zisandula ukubhengeza inyathelo elitsha elinethemba lokuba liyakwenza ukuba izixhobo zeKhayaKit zitshiphu kwaye kube lula kubaphuhlisi bolu hlobo ukwenza.
Isisombululo seLebhu yeSilicon sinamalungu amabini aphambili: isoftware yesiko evavanywe kwangaphambili kwaye yamkelwa yiApple kunye nemodyuli yezixhobo zeBluetooth. Iprotocol yeSilicon Labs exhasa iBluetooth 4.2 ibalulekile kwizixhobo zeKhayaKit, njengoko ibonelela ngenkxaso yokunxibelelana kwamandla asezantsi kunye netekhnoloji yokukhusela izixhobo ezikhuselekileyo.
Inyathelo lokuqala kule nkqubo kukuba abavelisi bathenge i-Silicon Labs HomeKit Bluetooth SDK Ke ngoko, kufuneka ube ngumnini welayisensi ye-Apple MFI ukwenza njalo. Ukuba le mfuno ifezekisiwe, akukho ngxaki ukuyifumana. Ukuphuhlisa izixhobo zokusebenza ngokusekwe kwiprotocol yeKhaya eKit kunye netekhnoloji yokhuseleko eyimfuneko inokufuna iimvavanyo ezininzi zokusebenzisana. Isisombululo seLebhu yeSilicon yeBluetooth yeKhaya sele ihlolwe kwangaphambili kwaye yaqinisekiswa yiApple kwaye iphumelele kuvavanyo lwesatifikethi sokucaciswa kweKhayaKit.
Esi siqinisekiso sangaphambi kokubonelela ngezibonelelo zabaphuhlisi xa kuziwa ekubekeni iimveliso zabo kwintengiso. Ikwanciphisa iinzame zobunjineli kwaye incede abathengisi bemveliso yokuphela banciphise umngcipheko ngokwazi ukufikelela kwizixhobo eziqinisekiswe ngu-Apple.
Ukongeza, iphakheji yesoftware ebonelelwe ziiSilicon Labs inikezela abaphuhlisi izixhobo ezahlukeneyo ezenza ukuba kube lula ukuvelisa ikhowudi yezixhobo zeKhayaKit kwaye uzenze zisebenze ngaphantsi kweyure. Oku kubandakanya i-Simplicity Studio v4, iNgcali yezaMandla, kunye nezinye ezininzi.
Ubungakanani beli sibhengezo kubaluleke kakhulu kubaphuhlisi, kodwa enyanisweni ekugqibeleni izibonelelo ziya kuwa nazo kubasebenzisi. Ngenkqubo elula kwaye efikelelekayo ngakumbi yokuvelisa izixhobo ezihambelana neKhayaKit ngenxa yezixhobo ezivela kwiiLabhoratri zeSilicon, abavelisi bokufikelela ngoku baya kuba sisivumelwano sokuxhasa iqonga le-Apple lasekhaya. Kuhlala kunjalo ukuba iKhayaKit igcinelwe kuphela izixhobo kunye neenkqubo ezibiza kakhulu.
Nge-app entsha yasekhaya kwi-iOS 10, iApple iqala ukutyhala ukusetyenziswa kweKhayaKit kwintengiso ephambili. Sele iqalile ukubonwa kwamanye amazwe ukuba abavelisi bezindlu baqala njani ukuthathela ingqalelo le nkqubo xa bekhuthaza ukuthengiswa kolwakhiwo lwabo. Ukunyusa ukwamkelwa kwenkqubo sisininzi sabasebenzisi, nangona kunjalo, kuya kufuna iintlobo ngeentlobo zezincedisi, ezihambelana kwaye zifumaneke ngexabiso eliphantsi. Ngokufanelekileyo, izisombululo ezitsha zehardware + zeSilicon Labs SDK inokukhawulezisa le nkqubo. Ukuqala inkqubo yokufumana i-SDK (yasimahla) kunye nokuthenga izixhobo zekhompyutha, abo banomdla banokuya kwiwebhusayithi yeSilicon Labs uqobo.
Ngalesi sibhengezo, kubonakala ngathi uluntu ngokubanzi lunethemba lokuba ukusetyenziswa kweKhayaKit kuya kuba yinto ethandwayo kwaye, ngaphezulu kwako konke, ukuba izixhobo kunye nezixhobo zolawulo lwasekhaya ziya kunciphisa ixabiso labo kwaye zifikeleleke ngakumbi kumsebenzisi ophakathi. Namhlanje, ukusetyenziswa kweKhayaKit kuncinci kakhulu, kwaye kuya kufuneka ube nepokotho ebanzi ukuze ukwazi ukujongana nexabiso eliphezulu elinesixhobo esihlala sinaso. Kuya kuba kuhle ukuba isisombululo seSilicon Labs siphumelele kwaye ukusetyenziswa kwayo kwasasazeka phakathi koninzi lwabenzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » IiLebhu zeSilicon zizama ukwandisa ukusetyenziswa kweKhayaKit
Uhlelo lokusebenza lwePhilips Hue luhlaziywa ngenkxaso ye-iPad kunye ne-3D Touch